Nomena lanja ny asan’ny Infirmiera - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Kapoaka mesure d’unité dans le commerce au quotidien à réformer? il y a 4 jours
Fiofanana andiany faha 16 ho an’ny mpampiofana mpanampy il y a 6 jours
Aza avela ho tany lavitra andriana ny Kaominina Ambanivohitr’i Solila il y a 7 jours
Andro maneran-tany ho an’ny Diabeta ny 14 novambra, mankalaza izany isika eto Madagasikara. Ny Amadia, Oms, ny Minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka, ireo no mandray an-tanana ny fankalazana. “Asan’ny infirmiera miatrika ny diabeta”, io no lohahevitra amin’ity taona ity. Asongadina ireo infirmiera satria izy ireo no akaiky ny diabetika, izy ireo no mikarakara ny diabetika…
Misy ny fitiliana maimaim-poana tao amin’ny Amadia Faravohitra tamin’io andro io. Ny fankalazana ofisialy dia any Nosybe miaraka amin’ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka sy ny Oms, ary ny Amadia any Nosybe no sady fitokanana ny tranon’ny Amadia any an-toerana ihany koa io fotoana io.
Ny zoma 13 novambra dia nisy hetsika niarahana tamin’ireo depiote, ny tanjona dia ny mba hamoahana lalàna mikasika ny diabeta ka tsy hanilikilihana ireo marary ary koa entina hanampiana azy ireo na dia hampihenana ny vola mivoaka amin’izy ireo ahafahany mitsabo tena.
« Tsy mifidy saranga, tsy mifidy taona ny diabeta fa mety ho voa daholo. Mizara roa fotsiny type 1 sy type 2. Ny type 1 dia fahita eo amin’ireo zaza. Raha ny ato amin’ny Amadia fotsiny izao dia misy 300 mahery eo izy ireo. Ny zaza diabetika dia misy valo volana ka hatramin’ny 25 taona. Be dia be izy ireo ».hoy ny Dr Ratsitratrinihafa José, mpitsabo ao amin’ny Amadia « Ao izao vao nisy ankizy tonga avy any Moramanga, ny maso efa tsy mahita, tavela tany tsy nisy nahita ». efa type 2 no nahazo ilay zaza. « Ilaina ny manao fitiliana na dia isaky ny misy fitiliana maimaim-poana ireny aza » hoy ihany ity dokotera ao amin’ny Amadia ity.
Betsaka ny olona no voan’ny diabeta saingy tsy mahalala akory ny toe-batany satria tsy mba nahalala nanao fitiliana. Entanina ny rehetra mba tsy hisalasala hanao izany fitiliana izany satria amin’izao fotoana izao dia efa misy izany manerana ireo Csb II, taorian’ny fandalovan’ny Covid 19. Mandoa vola fa rehefa misy hetsika tahaka izao ihany no maimaim-poana. Mila fantarina izay toe-batana izay ahafahana mijery izay tokony hatao. Manjary lasa vesatra ho an’ny Firenena raha sanatria marary. Olona tokony ho afaka hamokatra no tsy afa-manao inon’inona satria mety ho tsy mahita, vokatry ny diabeta, na koa mety marary ny tongotra mety misy fery tsy sitrana.
Tsy vitsy ny olona voan’ny diabeta raha ny eto amintsika. Mila raisina an-tanana izy ireny mba tsy hivadika ho vesatry ny Firenena fa ho isan’ireo mpandray anjara amin’ny fampandrosoana ihany koa tahaka ny rehetra.
Tontolo iainana... : 10 453 858 118 Ariary enti-miasa ho an’ny taona 2021 - il y a 8 heures
Teny Mahavelona : « Mibebaha: Ny tarehy ratsy no tsy azo ovàna fa ny toetra ratsy azo ovàna » - il y a 8 heures
Kere ny any atsimo sy akony : Vahoaka maro voatery nandao tanin-drazana hitady ravinahitra ka nivaro-pananana - il y a 2 jours